Dhimashada Rabshadaha Jigjiga iyo Qabridaharre Oo 45 Gaartay iyo Wadahadallo Bilaawday Warbixin.
Monday August 06, 2018 - 07:24:46 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay iska hor'imaadyo iyo rabshado ka dhacay illaa shan magaalo oo katirsan dhulka gumeysiga Itoobiya kujira ee Somaligalbeed.
Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in xaaladdu yara degantahay balse waxaa la dareemayaa abaabullo ciidan oo ay waddo dowladda Itoobiya.
Ilaha caafimaadka ee magaalooyinka Qabridaharre iyo Jigjiga ayaa sheegay in dad ka badan 45 qof ay ku dhinteen dagaalladii iyo rabshadihii dhacay sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay.
Dhimashada ugu badan waxay ka dhacday magaalooyinka Jigjiga iyo Qabridaharre kadib markii ay gorrodda islagaleen dadka kasoo jeeda Oromada iyo Soomaalida, ugu yaraan laba suuq oo kuyaal magaalada Jigjiga ayaa laboobay waxaana wali socda bililiqo iyo boob.
Ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa dad Soomaali ah ku laayay banaanka magaalada Jigjiga halka illaa 5 qof ay melleteriga Itoobiya ku dileen degmada Godeey Habeenkii Axadda.
Sidoo kale dad isugu jira Oromo iyo Tigree ayaa boobay suuqa weyn ee magaalada Dirirdhabe waxayna gubeen ugu yaraan laba warshadood oo dadka Soomaalida ah lahaayeen.
illaa 8 qof Soomaali ah balse heysta dhalashada dalka Jabuuti ayaa nolosha lagu gubay kadib markii guryihii ay deganaayeen dab laqabadsiiyay, sidoo kale waxaa basbeeshay Warshadda Xasan Barakaat oo kamid aheyd goobaha ganacsi ee ugu caansan magaalada Qabridaharre.
Rabshado shalay dhacay ayaa sababay in uu shaqada joojiyo tareenkii isku xiri jiray Jabuuti iyo Qabridaharre kadib markii dad caraysan ay burburiyeen wadada biraha ka sameysan ee tareennadu isticmaalaan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Odayaal dhaqameedyo taageersan Cabdi ilee ay waan waan iyo wadahadal ugu baaqeen Abeey Axmed R/wasaaraha Itoobiya waxaana socda dadaallo lagu baajinayo fal melleteri.
Maleeshiyaadka Liyuu Booliska oo maalintii Sabtiga si adag isaga difaacay ciidamada Melleteriga Itoobiya ayaa wali difaacyo uga jira xarumaha maamulka magaalada jigjiga waloow Melleteriga Itoobiya ay deganyihiin dhammaan waddooyinka magaalada soo gala iyo garoonka diyaaradaha caalamiga Jigjiga.
Lama oga in Cabdi ileey uu ka badbaadi doono howlgalka xididda siibidda ah ee Addis Ababa lagasoo qorsheeyay balse arrinta halista reebaysa ayaa ah isdilka u dhaxeeya dadka walaalaha ah ee Oromada iyo Soomaalida oo Xabashidu madaxa isku gelisay si ay ubaajiso kacdoonka shacabi ee wadanka ka socda.
Dhimashada ka dhalatay Qaraxyadii Wadanka Sri Lanka oo 290 gaartay.
Dhimashada Qaraxii Koontaroolka Madaxtooyada oo 15 gaartay iyo qarax kale oo ka dhacay Weydoow.